Encyclopedia ah ee loogu tala Sida loo celi iPhone: la / aan Lugood / iCloud / Computer
IPhone kasta congeal karo ama u baahan tahay in dib u bilaabay si ay si fiican u shaqeeyaan. Haddii aad dareentid in aad iPhone u qabata iyo aad u badan si tartiib ah, si dhab ah, waxaad u baahan tahay in ay dib. Dhab ahaantii waxaa jira laba nooc oo resets u iPhone: keddibna adag iyo dib jilicsan (wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan akhri adag dib vs. dib jilicsan). Dadka qaarkood ma oga oo ku saabsan marka la eego farsamada, laakiin waxa ay doonayaan in ay dib iPhone ka Lugood, ka dib iCloud iPhone ama dib iPhone aan computer. Tani waa meesha ay qodobkan ka yimaadaa. Baro faahfaahin dheeraad ah:
Qaybta iPhone 1. Warbixannada la Lugood
Qaybta 2. Sida loo celi iPhone on iPhone toos ah
Qaybta 3. Dib u celi iPhone la iCloud
Qaybta 4. Warbixannada iPhone la SafeEraser Wondershare (habka ugu nabad badan haddii aad ku socoto inay iska iibiso ama siiso iPhone iska)
Tallaabada 1. Ku lifaaq aad iPhone in computer iyo abuurtaan Lugood.
Tallaabada 2. Riix si aad iPhone liiska dhinaca bidix ee Lugood.
Tallaabada 3. Sax u Soo Celinta button laga bilaabi karo habka resetting ah. Lugood waxaad u baahan doontaa si loo xaqiijiyo tallaabada. Just guji soo celi si aan u xaqiijino. Waxaa laga yaabaa in aad dhowr daqiiqo qaado dhammayn nidaamka. Ha bareesada ka iPhone oo dhan nidaamka this!
Tallaabada 4. Markii la buuxiyo, Lugood wax weyddiinaysaan, haddii aad doonayso in la soo celiyo aad iPhone ka file gurmad ah. Dooro gurmad ah u danbeeyay si loo soo celiyo. Haddii aad ku socoto inay iska iibiso aad iPhone, waa in aad doorato "Calan sida iPhone cusub".
Si loo xaqiijiyo in aan laga badiyay wixii xog ah iPhone aad, ka hor inta resetting aad iPhone, fadlan gurmad aad iPhone in iCloud. Hoos waxaa ku qoran talaabooyinka la qaadayo si dib iPhone si toos ah qalab aad.
Tallaabada 1. Tubada app Settings ku saabsan iPhone, iyo dedeg Guud> celi> masixi All Content iyo Settings.
Tallaabada 2. Xaqiiji tallaabo aad iyo aad iPhone ha dhammaan macluumaadka aad u laga tirtirayaa. Marxaladani waxay qaadan kartaa dhowr daqiiqo.
Tallaabada 3. Ka dib markaas, raac ku xigeenka Mudanayaasha si ay u doortaan gurmad ah soo dhaafay iCloud ayaan idinka celin doonaa iPhone. Marka aan sidaa yeelno, ma waxaad waayi doonaa xogta iPhone aad. Dabcan, hadii aadan rabin in ay matain kasta oo macluumaadka jir on your iPhone, waa in aad u qotomiyey sidii iPhone cusub. Waa in aad.
iCloud waxaa laga heli karaa in la isticmaalo si dib u iPhone. Si aad u isticmaasho, waa in aad marka hore loo jeedsado ku Raadi My iPhone aad iPhone (Settings tuubada> iCloud, hoos iyo awood Raadi My iPhone). Ka dibna aad isticmaasho computer inay dib iPhone la iCloud.
Tallaabada 1. Open bogga - icloud.com iyo dooran Raadi My iPhone.
Tallaabada 2. In uu furmo suuqa cusub pop-up, guji Devices oo dhan. Raadi si aad iPhone oo dooran.
Tallaabada 3. Waxaa jira 3 fursadaha la heli karo: Play Sound, Lost Mode ama masixi iPhone. Dooro masixi iPhone in ay qarka u saaran inay goobaha warshad. Later aad u soo celin kartaa iPhone la gurmad iCloud ama u qotomiyey sidii qalab cusub.
Fiiro gaar ah: Recovery Mode masixi doono xogta oo dhan iyo habayn ka iPhone, waxaa resetting in la bixin kari warshad. Sidaas darteed, waxa aad helaysaa brand iPhone cusub oo aan wax macluumaadka gaarka ah.
Qaybta 4. Warbixannada iPhone la SafeEraser Wondershare
Haddii aad ku nasan aad iPhone inta badan, maxaa yeelay, aad rabto in aad masixi oo dhan macluumaadka gaarka ah ka hor ama iibinta iPhone, markaa waa in aad isticmaasho SafeEraser Wondershare . Waxaa masixi doono dhammaan macluumaadka ku saabsan iPhone, oo aad u iPhone sida qalab cusub. No xogta shakhsiga u soo baxo ka iPhone, xitaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka ma sheegi karo. Tani habka ugu nabad badan dib iPhone sida qalab cusub. Hoos waxaa ku qoran talaabooyinka soo socda:
Tallaabada 1. Download software ah oo ku xidh on your computer. Waxaa Launch iyo xiriiriyaan iPhone la your computer via cable USB ah.
Tallaabada 2. Inaad doorato "masixi dhammaan xogta ku saabsan qalab" iyo heerka ammaanka aad jeceshahay ah.
Tallaabada 3. Ku bilow in aad masixi iPhone.
Dib u celi iPhone la SafeEraser Video Tutorial
> Resource > Lugood > Dooro Sidaada la jecel yahay in celi iPhone: Iyadoo Lugood ama iCloud